दशैंका लागि नयाँ नोट असोज ४ वाट, कहाँ गएर साट्ने ? | समाचार
September 16, 2021 NepstokLeaveaComment on दशैंका लागि नयाँ नोट असोज ४ वाट, कहाँ गएर साट्ने ?
काठमाडौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले यस वर्ष दसैँ सुरु हुन केही समयअगाडिदेखि नै नयाँ नोट वितरण गर्ने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र वाणिज्य बैंक र तिनका शाखामार्फत यही ४ असोजबाट नयाँ नोट सटही सुविधा दिइने भएको छ । उपत्यकाबाहिरका लागि भने राष्ट्र बैंकको प्रेस कार्यालय र वाणिज्य बैंकबीचको समन्वयमा नोट सटहीको समय तोकिने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले प्रतिव्यक्ति १८ हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म सटही सुविधा दिने भएको हो । ५, १०, २०, ५० र १ सयका प्रतिबन्डलसम्म सटही हुने गरी यो सुविधा दिने भएको हो । करिब १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँका सानादरका नोट सटही हुने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ ।
हरेक वर्ष दशैंमा नयाँ नोट वितरण गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले गत वर्ष कोभिडका कारण राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण गरेको थिएन । यस वर्ष संक्रमण निकै घटेपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण गर्न लागेको हो । केही वर्ष पहिलेसम्म दशैंका लागि नयाँ नोट लिन राष्ट्र बैंकमा विहानको राति देखि नै सर्वसाधारणहरु लाइन लाग्ने गरेका थिए ।